Madaxweyne Xasan Sheekh : “Saraakiisha laamaha amniga waxaa laga rabaa inay natiijo rasmi ah ka soo saaraan..” – idalenews.com
Madaxweyne Xasan Sheekh : “Saraakiisha laamaha amniga waxaa laga rabaa inay natiijo rasmi ah ka soo saaraan..”
Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu ka walaacsanyahay amaanka garsoorayaasha iyo masuuliyiinta dowlada kadib weerarkii lagu qaaday maxkamada Gobolka banaadir ee dadka badan ay ku dhinteen.
Warsaxaafadeed ku qornaa Afka Ingiriiska oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in la adkeynayo ammaanka xarumaha dowladda oo dhan, gaar ahaan kuwa ay ku shaqeeyaan garsoorka dalka.
“Waxaan garowsannahay walaaca iyo cabsida mas’uuliyiinta maxkamadaha iyo shaqaalaha kale ee dowladda, sidaasi darteed waxaan ballan-qaadayaa in la sugi doono ammaanka dhammaan xarumaha dowladda,” ayuu ku yiri madaxweyne Xasan Sheekh warsaxaafadeedka uu soo saaray.
Madaxweynaha ayaa dhanka kale sheegay inay jiraan khataro ka imaanaya dhinaca Al-shabaab kaddib markii ay kasoo baxeen furimihii dagaalka ayna billaabeen inay ku dhex-dhuuntaan shacabka si ay u waxyeelleeyaan amniga dalka.
“AMISOM waxaan ka codsanaynaa inay sii laba-jibbaaraan taageeradooda, waxaana innaguna sameyn doonnaa isbedel weyn” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay xafiiska madaxweynaha.
Kooxda Al-shabaab ayaa dusha uridatay weerarki Axadii la soo dhaafay lagu qaaday Maxkamada gobolka Banaadir, kaasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 30-ruux ayna ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan.
“Saraakiisha laamaha amniga waxaa laga rabaa inay natiijo rasmi ah ka soo saaraan dadaallada ay wadaan ee ku aadan baaritaannada weerarkii lagu qaaday xarunta maxkamadaha, waana inay la yimaadaan tallaabooyin lagu adkeeynayo amniga xarumahaas si looga hortago weeraro kale oo halkaas laga fuliyo” ayuu madaxweyhuhu warkiisa ku yiri.
Hadalka Madaxweynaha ayaa waxa uu imaanayaa xili kooxda Al-shabaab ay mar kale ku goodisay inweeraro argagaxiso ay ka geysan doonaan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
” Daqiiqado ka hor ayuu xiriir ila soo sameeyay mid kamid ah Ragii isku qarxiyay Maxkamada Gobolka ” Al Amrikiyah